1.हामीसँग4उत्पादन लाइनहरू छन् र2तातो उपचार उत्पादन लाइनहरू, एक दिन बोतल ज्याक एक दिन, भुइँ ज्याक उत्पादन गर्न सक्दछौं।.
2.कम्पनीले 1,000000 वर्ग मीटरको क्षेत्र समेट्छ, कम्पनीले "प्रतिष्ठाको प्राथमिकता" उत्पादन, उद्योगमा राम्रो प्रतिष्ठा स्थापना गर्न, उद्यम स्केल बढ्दै गयो।. YICENG ले तपाईको सामूहिकसँग विश्वास गर्दछ, त्यहाँ राम्रो छ, येस्सी ang ्गमा विश्वास गर्दछ, येस् ung ्ग, येस् ung ्ग गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई यो उत्तम सेवा र ग्यारेन्टी दिन्छौं.
We.कम्पनीले सीएनसी लान्ड, मिलिंग मेशिन, स्थिर लोड टेस्ट, चट्टानक कडा मेसिन टेस्टिंग, यार्कावा रोबोट टेस्टिंग, पेन्चिंग प्रोसेसिंग र टेस्टिंग उपकरणहरू, पंचिंग प्रोसेसिंग र परीक्षण.कम्पनीको लागि कुञ्जी भागहरूको स्पेक प्वालहरू - ज्याक सिलिन्डर, सीमा प्वालको सम्बन्धमा निर्धारणको लागि, ताकि उत्पाद क्वालिटी एक गुणा गुण हो.
?.हाम्रा उत्पादनहरू मुख्यतया ISA, स्पेन, स्पेन, स्पेन, बेलायत, कोरिया, क्यानाडा, क्यानाडा र आदि जस्ता देशहरूमा निर्यात गरिएको छ.हाम्रा ग्राहकहरूले धेरै OEM ग्राहकहरू समावेश गर्छन् जसले ट्रेन, अटोमोबाइल, फोरमोफ्ट र निर्माण मेसिनरीमा विशेषज्ञताका 10 मध्ये 10 भन्दा बढी कम्पनीहरूको रूपमा एक प्रमुख कास्टिंग आपूर्तिकर्ताको रूपमा सहयोग गरेका छन्.
Zheziag Yyiung मेशिनरी को., लिमिटेड.200 2006 मा स्थापना भएको हो. जुन यांग्त्ज नदी डेल्टा आर्थिक बेल्ट शहर, Jianghae को केन्द्रमा अवस्थित छ, जहाँ शंघाई, निञ्जू, एन्जाबो, आदि, जुन यातायातका लागि धेरै सुविधाजनक छ. कम्पनी बिभिन्न इन्जिन क्रेन, भुइँमा jach jack 3t, फ्लोर प्रसारण ज्याक हो जुन अनुसन्धान, विकास, उत्पादन र बिक्री को लागी एक निकाय को विशेष उद्यम हो. कम्पनीले 1,000000 वर्ग मीटरको क्षेत्र समेट्छ, कम्पनीले "प्रतिष्ठाको प्राथमिकता" उत्पादन, उद्योगमा राम्रो प्रतिष्ठा स्थापना गर्न, उद्यम स्केल बढ्दै गयो।. YICENG ले तपाईको सामूहिकसँग विश्वास गर्दछ, त्यहाँ राम्रो छ, येस्सी ang ्गमा विश्वास गर्दछ, येस् ung ्ग, येस् ung ्ग गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई यो उत्तम सेवा र ग्यारेन्टी दिन्छौं. EPOT मेकानिकल बिभिन्न इन्जिन क्रेन, भुइँमा jach jack 3t, फ्लोर प्रसारण ज्याक हो जुन अनुसन्धान, उत्पादन, उत्पादन र बिक्रीको लागि एक निकायको विशेष उद्यम हो.1. हामीसँग योग्यताहरू छन्: हामीसँग औपचारिक योग्यता प्रमाणपत्रहरू छन्. निर्माण टेक्नोलोजी: निरन्तर अनुसन्धान र नवीनता 3. ग्राहक संतुष्टि: सन्तोषजनक उत्पादन प्रदान गर्नुहोस्.
2.. हामी कसरी गुणवत्ताको ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं?